Samsung waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa taleefankeeda isku laaban | Androidsis
Eder Ferreno | | Mobiles, Samsung
Xanta badan kadib, sidii toddobaadkan la filayey, Waxaa si rasmi ah loo soo saaray taleefanka gacanta ee isku laaban Samsung. Telefoon la wacay si loo soo saaro faallooyin badan oo suuqa ku saabsan, taasina waxay u fureysaa waa cusub suuqa Android. Qalab aan magaciisa rasmiga ah la shaacinin, inkasta oo la isla dhexmarayo inuu magaciisu yahay Infinity Flex, waana horumar weyn oo ay shirkadda Kuuriya u sameysay xagga naqshadeynta, maadaama ay caqabad weyn tahay in la helo taleefan leh astaamahan.
Samsung horey ayey khibrad ugu laheyd shaashadaha qalooca, laakiin tan Infinity Flex ee shirkadda Kuuriya ayaa tallaabo dheeraad ah ka sii qaaday. Waxaan u helnaa shaashad isku laaban taleefanka isku laabmaya. Markuu taleefanku furan yahay, waa kaniini, markuu xirnaana wuxuu noqdaa moobil.
In kasta oo soo-jeedintani runtii ahayn soo-bandhig sida oo kale. Tan iyo markii la soo bandhigayay taleefanka, nalalka waa la damiyay, markaa suurtagal ma ahayn in waxyaabo badan oo taleefanka ah laga ogaado. Nasiib wanaag, waxaan haynaa muuqaallo laga soo qaaday dhacdada. Iyaga ayaa mahad leh waxaan helnaa fikrad ah waxa Samsung ay ku bixiso qalabkan.
Waa taleefan… Waa kiniin… Waa taleefan ku dhex wareegaya kaniini! #SDC18 pic.twitter.com/FgwpJPjqTn
- SAMSUNG KHATARAHA (@samsung_dev) November 7, 2018
Markuu qalabkan Samsung furan yahay, wuxuu la mid yahay kiniin yar, oo leh xoogaa shaashad laba jibbaaran. Waxyaabaha cajiibka ah ayaa ah in shaashadda lafteeda ay isku xirmayso, sidoo kale waxaan leenahay shaashad labaad, oo ku taal banaanka qalabka, kaas oo u shaqeeya sida taleefanka gacanta. Nidaam soo jiitay indhaha warbaahinta. Si buuxda u furan, oo leh qaabka kiniinkeeda, waxay leedahay shaashad 7,3-inji ah.
Inkasta oo shirkadda Kuuriya ay sheegato taas xilligan iyagu diyaar uma ahan inay wada muujiyaan. Shirkani wuxuu ahaa mid horumarsan, si aan wax badan uga ogaano waxa qalabkani u keenayo suuqa. Laakiin Samsung lama wadaagin wax faahfaahin ah oo taleefankan ah.
Ku saabsan magaciisa waxba lama xaqiijin. Samsung lafteeda ma xaqiijin wax magac ah, in kasta oo ay jiraan laba ikhtiyaar oo u muuqda inay xoog ku sii kordhayaan xilligan, dhinaca kale Infinity Flex, oo aan hore uga soo hadalnay, haddana magaca Galaxy X ama Galaxy F ayaa weli jooga. Laakiin waxay umuuqataa inaan sugeyno ilaa aan waxbadan ka ogaanno.
Marka laga hadlayo nidaamka hawlgalka qalabka, waxay umuuqataa inay adeegsan doonto nooc caadi ah oo Android ah. In kasta oo aan sugi karno isbeddelada ku dhaca is-dhexgalka, tan iyo markii Samsung ay soo bandhigtay qaabkeeda cusub One UI, oo aan kaga hadli doono maqaal kale. Is-dhexgal ku habboon dabeecadaha gaarka ah ee qalab sidan oo kale ah. Marka waxay la timid barnaamij cusub oo ay soo cusbooneysiisay shirkadda Kuuriya.
Sidoo kale, shirkaddu waxay gacan ka heshay Google xagga soo saarista aaladda. Si gaar ah si gaar ah taageerada, tan iyo markii la xaqiijiyay in Android ay yeelan doonto taageero loogu talagalay taleefannada isku laaban. Samsung ma ahan shirkadda kaliya ee leh taleefan leh astaamahan, sidaan horeyba kuugu soo sheegnay, noocyo kale sida Huawei, LG o Xiaomi waxay hadda horumarinayaan mid iyaga u gaar ah, kaasoo suuqa ku dhici lahaa sannadka 2019-ka.
Marka waxaan sidoo kale aragnaa sida nidaamka hawlgalku wuxuu la jaan qaadayaa waxa suuqa gaadhaya. Sababtoo ah way cadahay in taleefannada isku laaban ay noqon doonaan mid ka mid ah isbeddellada waawayn ee Android ee sannadka 2019. Waxayna noqon karaan kacaan suuqa ka jira, in kasta oo ay noqon doonaan macaamiisha haysta ereyga ugu dambeeya.
Tani waa arrin aysan Samsung shaaca ka qaadin hadda. Wax walba waxay muujinayaan in taleefankan lagu soo bandhigi karo CES 2019 ee Las Vegas rasmi ahaan, laakiin xilligan ma hayno wax xaqiijin ah oo noo sheegi doona. Sidoo kale wax xog ah kama hayno qiimaha suurtagalka ah ee qalabkani lahaan lahaa.
Waxa cad waa taas Waxay noqon doontaa qaabka ugu qaalisan ee buugga Samsung. Laakiin ma hayno wax macluumaad ah ama qiyaas macquul ah oo ku saabsan qiimahan. Sidaad u aragto, soojeedintii ugu horreysay oo shaki badan nagaga tagta hadda. Marka waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ka ogaanno qaabkan dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung taleefanka isku laaban ayaa hadda rasmi ah
Ku hagaaji xisaabtaada adigoo ku ciyaaraya RPG xisaabtiisii ​​hore iyo sixirka